Phantse bonke abafazi abakhulelweyo balinde ixesha apho banesisu. Ukongezelela, abanye abafazi abakhulelweyo bayaliswa yintshintsho yabo kwisigane sabo, ngokuba kunye kunye nesisu, ezinye iinxalenye zomzimba zikhula kwaye zijikeleze. Yikuphi, ngendlela, ayikholisa umama wesikhathi esizayo.
Ngexesha lokukhulelwa, ubunzima besifazane buya kwanda kwaye oku kuqhelekileyo, kuba inzuzo yokunyusa ibonisa ukuba ukukhulelwa kuyinto eqhelekileyo. Nangona kunjalo, inzuzo yesisindo kufuneka ihlale kwimida emiselweyo, eyahlukileyo kumfazi ngamnye.
Ngokomyinge, ukukhulelwa okupheleleyo umfazi wesibini ukusuka kwi-10.6 ukuya ku-14.9 kg. Ukuze "ungabonakali" ungathatha 2-4 kg kuphela. Kodwa kufuneka kwakhona ukhunjulwe ukuba umfazi okhulelweyo ufuna iimfumi ezongezelelweyo zeoli ukwenzela ukukhusela umntwana kwisalathiso sangaphandle.
Oogqirha bezintlu zezinyunyi zikholelwa ukuba ukuba ngexesha lokukhulelwa, umfazi ufumana ukusuka kwi-7 ukuya kwi-17 kilogram zobunzima, oku kuqhelekileyo. Kutheni ikhefu elinjalo kumanani? Oku kungenxa yezizathu ezininzi ezichaphazela inani leeksilo ezifunyenweyo ngexesha lokukhulelwa. Esinye sezizathu kukuba unyaka wexesha elizayo unina, umdala lowo, ulungelelaniso lokuphucula. Esinye isizathu sinokuba yi-toxemia enzima kwi-trimester yokuqala yokukhulelwa, ngelixesha eziliqela ezili-kilogram zilahleka, kodwa emva koko umzimba uya kuqala ukuzalisa iikhilogram ezilahlekileyo. Esinye isizathu sinokuba ngumncinci (ngaphezu kwe-4 kg), elinde umama. Enyanisweni kule meko i-placenta iya kuba ngaphezu kwesilinganiso. Isisindo esithinteleyo sinokuthi ukuba umfazi unenkanuko yokukhula xa ekhulelwe, kodwa akakwazi ukumelana naye.
Ukufumana ubunzima obunzima bomfazi okhulelweyo kuqikelelwe ngugqirha ngesiseko sobunzima ngaphambi kokukhulelwa, kunye nomzimba wakhe. Ukuba ngaphambi kokukhulelwa lo mfazi wayemncinci, ngoko umgangatho walo wokuzuza ubunzima kuya kuba yi-12-17 kg. Ukuba ibhinqa ngaphambi kokuba ukhulelwe libe nomzimba oqhelekileyo, kuya kubakho ukudayela ukusuka kwi-11 ukuya kuma-16 kilogram. Ukuba ngaphambi kokuba umfazi abe nomfazi, wayenomgangatho obuninzi, ubunzima bakhe bunokuba yi-7-1 kg. Ibhinqa elungileyo kwiRubens inokufumana kuphela i-6 kg ukukhulelwa konke.
Wonke umfazi welizwi elithi "ukuvisisana nobuhle" uyaziphatha ngendlela eyona ndlela: abafazi banomthwalo obunzima, kunye nabamelwane abasetyhini besithi "I-Skinnyaya enjalo!" Ngoko ke oogqirha basebenzise imali ekhethekileyo-i-BMI (oko kuthetha ukuba i-index mass mass index) kunye nefomula yokubala ixabiso.
I-BMI = ubunzima bomzimba / ukuphakama kwisikwere (ubude bulinganiselwe kumitha, kunye nobukhulu obulinganiselwe kwiikhi)
I-BMI <20 - ubunzima obunganeleyo
BMI = 20-27 - ubunzima obuqhelekileyo
I-BMI> 27 - Ukukhululeka
I-BMI> 29 - ukukhuluphala
Umzekelo: ubude be-164, nobukhulu obungama-64 kg
64 / (1.64 x 1.64) = 23.79 - i-BMI - ubunzima obuqhelekileyo
Ngethuba lokukhulelwa, esi sibonakaliso sinomntu ngamnye. Ngexesha leenyanga ezintathu zokuqala ukukhulelwa, umfazi unokufumana i-1-2 kg kuphela, oko kukuthi, kukho isisindo esincinane. Kwezinye iimeko ze-toxemia ezinzima, umfazi okhulelweyo unokude alahlekelwe iikhilogram eziliqela. Ngaphezulu kwexesha lonke, izinga lokukhula liya kwanda: ibhinqa liya kubamba i-500 gram ngeveki. Ukuba isonto elilodwa likhulelwe lafumana ama-250 amagremu, kwaye okwesibini i-gramu 750, ngoko oku kuqhelekileyo, into ephambili kukuba akufuneki kubekho nantoni na ngokukhawuleza. Kwinyanga yokugqibela yokukhulelwa, xa isahlulo sokukhupha umthamo esinciphisa isisindo sinciphisa malunga nama-500-1000 amagremu. Oku kuqhelekileyo, kuba umzimba ubonisa ukuba ulungiselela abasebenzi.
Akuyimfuneko ukuhambelana neengcebiso zikagogo kwaye kukho "ezimbini" okanye "ubuninzi obufunayo", ngoko uzuzo olulinganiselayo luya kuchaneka kwaye lungenzi nzakalo kwimpilo yakho. Kufanelekile ukuba sikhumbule ukuba izicubu ezinamafutha amaninzi zingabangela ukuphuhliswa kwesifo sikashukela okanye kubangele i-toxicosis. Kodwa akufanele uphinde ulambile, ulungiselele ukuba ukhulule iintsuku, ufumane ukutya, konke oku ngexesha lokukhulelwa alivumelekanga. Ngaba ukhulula ngokukhawuleza? Emva koko ushiye amafutha ezilwanyana kunye nocoko, ngakumbi kwi-tshokoleta.
Ukuze ufumane ulwazi oluchanileyo malunga nokufumana ubunzima bakho, kucetyiswa ukuba uzilinganise rhoqo kwaye wenze okungcono ekuseni, kwisisu esingenalutho, mhlawumbi ngexesha elinye, kwisitya esifanayo okanye ngaphandle kwayo.
Nguwuphi uhluko phakathi kweminyaka phakathi kwabantwana kuthathwa njengento efanelekileyo kakhulu ekukhuleni kunye nokuphuhliswa kwayo?
Ikhefu nge rhubarb
U-Irina noSergei Bezrukov bathengisa iimpahla zabo
Ingaba inkokhelikazi iya kuba nolonwabo ebomini bakhe?
Umntu womntu ngumbala weenwele zakhe